UDavid Masondo – The Ulwazi Programme
U-David Masondo wazalelwa e-Hammersdale, eThekwini ngo-1950. Waqala umsebenzi wakhe wezomculo, wenza izingoma emalokishini njenge-Groovy Boys. Kamuva wasungula i-Soul Brothers, iqembu eliphumelele le-South African soul concept (umbhaqanga), isitayela se-jazz esifakwe ngesiZulu esaduma sathandwa ngo-1960. Wayengumbhali wazo zonke izingoma zeqembu, futhi engumculi ohola phambili weqembu. I-Soul Brothers iqophe ama-albhamu angaphezu kuka-30 selokhu yasungulwa ngo-1974. Leli qembu belimatasa liqopha i-albhamu yalo yesi-39 ngesikhathi kudlula uMasondo ngo-2015.
Isitatimende esikhishwe yiHhovisi likaMengameli ngo-2012 sathi:
“Isimo somculo waseNingizimu Afrika, ikakhulukazi uhlobo lwaseMbhaqanga ucebile ngenxa yegalelo elikhulu leSoul Brothers. Ngiyithokozela kakhulu imiyalezo yenu yokwakha umphakathi, ubumbano lomphakathi, inhlonipho ngempilo yabantu kanye nesithunzi sabo kanye nokuhumusha kwabo okuhle kwemibhalo yansuku zonke ezihlale zigcwele kuzo zonke izingoma nakuwo wonke ama-albhamu kusukela ngo-1976, lapho iqembu lisungulwa.”